Nke a bụ a dị mfe helikopta maka FS2004. -Agụnye ọtọ dum Carmin usoro na redio. Dị na abụọ mma repaints. Ụda dị nnọọ mma.
The Eurocopter EC120 Colibri bụ otu engine ìhè helikopta mepụtara Eurocopter na mmekorita ya na China National Aero-Technology Import & Export Corporation, Harbin Aircraft Manufacturing Corporation na ST Aerospace, na gbakọrọ na uloru nke Eurocopter na Marignane. E mere ya na-ebu a pilot na anọ njem, na nwere a egosipụta ọtụtụ ihe imeghari ka mkpa nke ya ahịa, ma na-azụ ahịa ma ọ bụ onwe ụlọ ọrụ ma ọ bụ agha.
Onye edemede: Laurent Corriea
Eurocopter 135 onye Onyenwe anyị-EMS Medical FS2004
ICARO BK117 Final Edition ngwugwu FS2004